Tallaalka iyo Cadeynta Tallaalka Covid - Krisinformation.se
Waxa aad halkan ka helaysaa macluumaad ku saabsan qorshaha tallaalka, iyo waxyaabaha ku saabsan sida ay bulshadu ugu qorsheyneyso inay dabogal ugu sameyso khatarta uu leeyahay tallaalku iyo sidoo kale waxyaalaha ku saabsan Cadeynta Tallaalka Covid. Cadeynta Tallaalka Covid ku waa adeeg elegtaroonig ah oo bilaash ah oo in covid -19 lagaa tallaalay muujinaaya.
Uppdaterades 14 sep 2021 14:54
Waa maxay Cadeynta Tallaalka Covid?
Cadeynta Tallaalka Covid waa dokumenti bilaash ah, dhijitaal ah ama warqad ah, kaas oo muujinaysa in lagaa tallaalay, natiijada tijaabo lagaa qaadey ay muujisay inaan lagaa helin ama aad ka bogsatey Covid-19. Fikrada ka danbeysaa waxa weeye inay safarada wadanka dibadiisa ee Midowga Yurub dhexdooda ah ay dhibyareyso.
Waxa taasi Iswiidhan masuul ka ah hey'ada E-hälsomyndigheten taas oo ka masuul ah adeegga elektarooniga ah ee Cadeynta Tallaalka Covid ka.
Sidee ayaan u helayaa Cadeynta Tallaalka Covid ka?
Todoba maalmood ka dib tallaalkaaga ayaa tallaalkaaga la soo wargalinayaa Diiwaanka tallaalka ee qaranka (Nationella vaccinationsregistret). Marka la soo wargaliyo, aad cadeyn dalban kartaa adigoo soo maraaya adeega internetka ee adeegga Cadeynta Tallaalka Covid.
Haddii aad rabto cadeynta ka bogsashada ayaad u baahan tahay inaad tusto natiijada tijaabo ay xairfadlayaasha daryeelka caafimaadku qaadeen ugu yaraan kow iyo toban maalmood ka hor ay muujisay in lagaa helay Covid-19. Tijaabada degdega ah ee nooca antigen-ka ama tijaabada unugyada difaaca jirka ayaan shaqeyneynin.
Haddii aad u baahan tahay cadeyn in natiijada tijaabo lagaa qaadey ay muujiysey in aanad qabin waa in tijaabada lagaaga qaadey daryeel caafimaad bixiye ku xiran adeegga Cadeynta Tallaalka Covid. Waxaad liistada daryeel caafimaad bixiyeyaasha ku xiran ka helaysaa Hey'ada Caafimaadka ee Elektaroonigga ah (E-hälsomyndigheten).
Si aad cadeynta Tallaalka Covid-ka ugu dalbato ayaad u baahan tahay inaad haysato ID-elektaroonig ah (e-legitimation) oo Iswiidhish ah. Waxaad macluumad ku saabsan sida aad u dalban karto ID-ga elektarooniga ah (e-legitimation) ka helaysaa e-legitimation.se. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Haddii aanad laheyn, ama aanad isticmaali karin aqoonsiga elektarooniga ah ayaad heli kartaa in cadeyntaada Tallaalka Covid ka cinwaanka guriga aad ka diiwaan gashan tahay laguugu soo diro. Waxaad foomka taas ka helaysaa bogga internetka ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Sideen u isticmaalayaa Cadeynta covid-ka?
Markaad Midowga Yurub dhexdiisa safrayso ayaad cadeynta tuseysaa kantaroolka xadka marka ID-gaaga la eegaayo.
Waxaad u baahan tahay inaad cadeyntaada covid-ka haysato dhamaan intaad safrayso.
Ka fikir inuu yahay waddanka aad u safreyso cida go’aaminaysa sharciyada halkaas ka shaqeynaaya iyo inay adiga masuuliyadaada tahay inaad hubiso haddii aad shuruudaha gelitaanka buuxineyso.
Ka akhriso bogga Sweden Abroads waxyaalaha xeerarka gelitaanka ee dalal kala duwan ku saabsan. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Maxaa dhacaaya haddii aanan anigu Cadeynta Tallaalka Covid haysan? Ma safri karo markaas miyaa?
Laga bilaabo 13 ka Ogosto, waxaad u baahan doontaa inaad haysato cadeyn tallaalka Covid oo ay soo saartey Hey'ada Caafimaadka Elektarooniga ah haddii aad ku dhex safreyso Midowga Yurub gudahiisa oo aanad tusto in lagaa tallaalay, natiijada tijaabo lagaa qaadey muujisey inaan lagaa helin ama aad Covid-19 ka bogsatay.
Cadeynta Tallaalka Covid waxay fududayn doontaa dhaqdhaqaaqa xorta ah ee Midowga Yurub dhexdeeda ah. Laakiin Cadaynta Tallaalka Covid ayaan taas damaanad/kafaalo qaadeynin. Waxa muhiim ah in had iyo jeer si taxadir leh loogu sii ogaado xeerarka gelitaanka, iyo wixii xeerar ah ee karantiinka iyo tijaabooyinka ku saabsan ee wadanka aad rabto inaad u safarto ka shaqeynaaya.
Macluumaadka safarka oo Iswiidhish ku qoran
Ugu horeyn macluumad safarada wadanka dibadiisa ka raadso Wasaarada Arrimaha Dibadda (UD)
Bogga safaaradaha ee Sweden Abroad waxa ku dhigan macluumaad ku saabsan xeerarka dalal kala duwan ka shaqeynaaya.
App-ka Wasaarada Arrimaha Dibeda ee resklar ayaa kuu fududeynaaya in lala socdo waxa khuseeya meesha aad u safrayso.
Ka fikir inay taasi ay sidoo kale khuseyn karto wadamada aad sii mareyso/taraansidka ku tahay, taasi waxa weeye hal ama dhowr wadan oo aad sii mareyso markaad meesha aad tageyso ku sii socoto.
Goorma ayaan cadeyn heli karaa illaa intee ayayse shaqeynaysaa?
Cadeynta tallaalka ayaa la heli karaa ka dib dawska koowaad iyo kan labaad labadaba. Xusuusnow inay ilaa iyo toddobo maalmood qaadan karto ka hor inta aan dawska/dooska tallaalka la soo gelin/lagu soo qorin iyadoo wadamada kala duduwani ay leeyihiin sharciyo kala duwan oo ku saabsan inta daws/doos ee so gellitaanka la iska dalbanaayo.
Ka fikir inay jiraan wadamo dalbanaaya inuu wakhti ka soo wareegay ka dib markii dawska labaad la qaatey ka hor intaan halkaas loo safrin. Waa inaad sidaas darteed markasta hubiso waxa wadanka aad u safrayso khuseeya/ka shaqeynaaya.
Waxay cadeynta tallaalku shaqeynaayaa 90 maalmood, markaas ka dib ayaad dib ugu cusbooneysiin kartaa si la mid ah sidii aad ku heshay.
Marka natiijada tijaabo ay muujiso inaan lagaa helin ayay taasi dhowr maalmood oo kaliya shaqeynaysaa – hubi inta ay natiijada tijaabada aan lagaa helin shaqeynayso meesha aad u socoto.
Miyey cadeyntaada tallaalka covid daws/doos tallaalka ahi ka maqan yahay?
Sababta taasi ay badanaa ku dhacdo waa in aan macluumaadka wali loo soo gelin. Xusuusnow inay qaadan karto ilaa iyo toddobo maalmood ka hor inta aan dawska/dooska talaalka la soo gelin.
Cadeymaha Tallaalka Covid qaarkood ayaa qalad laga helay. In kastoo labadii jeer ee tallaalka la qaatey ayaan haddana dhammaan dawsasku ku dhigneyn cadeynta. Inuu macluumaadku maqan yahay ayaa ku xiran cilad farsamo awgeed ama dib u dhaca ku yimid kala wareejinta. Hey'ada E-hälsomyndigheten oo ay goboladu weheliyaan ayaa baaritaan ku sameynaaya waxa khaldamay si taas sida ugu dhakhsaha badan loogu saxo.
Haddii aanad degdeg u safreynin iska sug dhowr maalmood ka dibna la soo bax Cadeynta Tallaalka Covid oo cusub.
Ma degdeg ayaad ugu baahan tahay inaad safarto? Cadeynta Tallaalka Covid ma aha shuruud in Midowga Yurub gudahiisa lagu safro. Waxa Cadeynta loogu talogalay inay safrida fududeyso. Waxa suurtogal ah in Midowga Yurub dhexdiisa lagu safro xitaa haddii aan la is tallaalin ama aanad helin Cadeynta Tallaalka Covid, waxa ka mid ah xeerka ku-meel-gaarka ah ee inta Cadeynta Tallaalka Covid la hirgalinaayo. Xeerarka ku meel gaarka ahi waxa uu shaqeynayaa ilaa 12 Ogosto iyadoo ay taas micnaheedu tahay inaad halkii aad ka tusi laheyd cadeynta talaalka covid aad tusi karto shahaado safarka oo muujineysa in tijaabo covid-19 ah oo lagaa qaadey ay muujinayso inaanad qabin.
Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa la sameynaayo haddii daws/doos tallaalka ahi ka maqan yihiin Cadeyntaada Tallaalka Covid bogga internetda ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Miyay carruurtu heli kartaa cadeynta tallaalka covid?
Xilligan hadda la joogo ayuunbaa kaliya carruurta qaarkood 18 jir ka yar la tallaalayaa, tusaale ahaan kuwa xanuunada qaar qaba. Waalidkooda ayaa cadeynta tallaalka ka dalban kara hey'ada E-hälsomyndigheten.
Qofka 16 sanno buuxiyay ee leh aqoonsi elektaroonig ah waxa uu bogga Covidbevis.se kala soo degi karaa cadeyntiisa tallaalka.
Waxaad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Cadeynta covid-ka ka helaysa Boggaga internedka ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Maxaa carruurta iyo dhalinyarta khuseeya?
Marka dadka 18 sanno jirka ah iyo wixii ka weyn tallaalka loo soo bandhigo wajiga 4 dhexdiisa ayaa dhalinyarta dhalatay 2005 iyo sanadadii ka horeeyay loo soo bandhiga doonaa talaalka. Gobolada laftooda ayaa go'aamin doona siday u maareynayaan ogolaanshaha marka carruurta aan qaangaarin la tallaalaayo, gobollada qaarkood waxay tusaale ahaan u dirayaan foom oggolaanshaha oo ay balan la socoto halka ay kuwa kalena ay kaliya qiimeyn ku saleysan qaangaarnimada goobta ku sameynayaan. Waxa markasta muhiim ah in la hubiyo/eego waxa tallaalka gobolkaaga ka shaqeynaaya.
Carruurta iyo dhalinyarada 16 sano jirka ka yar ayaan caadi ahaan loo soo jeedineynin inay covid-19 iska talaalaan. Haddii uu jiro cudur lagu sababeynaayaa ayaa markaa lagula talinayaa in dhakhtarka daaweynaaya lala xiriiro. Waxay Folkhälsomyndigheten soo jeedinayso in carruurta leh xaaladaha caafimaad qaarkood la tallaalo laga bilaabo da'da 12 sanno jirka.
Waxaad macluumaad dheeraad ah ka helaysaa bogga internedka ee Folkhälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
May tahay inaan tallaalka ka dib ka fikiro?
Waxa muhiim ah in qofka la tallaalay uu sii wato inuu talooyinka guud ee qaranka iyo talobixinada raaco. Ha'yada Caafimaadka Bulshada ayaase laakiin wax waafajisay talobixinteeda ku socda dadka la tallaalay. Laba tobobaad ka dib markaad dooska labaad ee tallalka qaadato ayaad leedahay difaac wanaagsan oo kaa ilaaliya inaad si xun ugu jirato, sida laga soo xigtey Hay'ada Caafimaadka Bulshada. Waxaase muhiim ah in dooska labaad la qaato si difaacu ugu noqdo mid waxtar leh oo muddo dheer shaqeeya.
Markaad laba doos qaadato ka dib ayaad leedahay difaac wanaagsan oo kaa ilaalinaaya inaad si xub ugu jirato iyadoo aanad ammaan ku dareemi karto in aanad Covid-19 si xun ugu xanuunsan. Laba todobaad ka dib marka dooska labaad la qaadato ayaa qofka aan calaamado laheyni uu guriga ka bixi karaa xitaa haddii qof kale oo qoyska ka tirsan uu covid-19 qabo.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxyaalala la waafajiyey dadka la tallalay waxa laga helayaa Boggaga internedka ee Ha'yada Caafimaadka Bulshada (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Sii wado inaad dadka kale ka ilaalisid
Waxa jiri karta waxoogaa khatar oo aad adigu Covid-19 ugu jiran karto xitaa markaad is tallaasho. Waxaad markaasna qaadsiin kartaa dadka iyadoo xitaa adigu aanad wax callaamado ah yeelanin. Sidaa darteed ayaa waxa wali qofka la tallaalay sii shaqeynaaya tallooyinka guud ee ah:
guriga joog haddii aad jiran tahay
masaafad u jirso
is tijaabi markay calaamado jiraan
Dooska lagu kaabaayo
Dadka difaaca jirkoodu aadka u dhacsan yahay ayaa sida laga soo xigtay Hay'adda Caafimaadka Bulshada, badiyaa labada doos ee tallaalka ka dib yeesha fal celin ka xun oo difaaca jirka marka loo eego dadka wada caafimaad qaba. Waxay sidaa darteed difaac wanaagsan oo Covid-19 ah ka heli karaan hal doos oo tallaalka oo dheeraad ah. Sidaas darteed waxay soo jeedinaysaa Hay'adda Caafimaadka bulshadu in hal doos oo tallaalka Covid-19 oo dheeraad ah la siiyo qofka difaaca jirkiisu aadka u dhacsan yahay. Soo jeedintu waxay khuseysaa dadka 18 jirka ka weyn.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kooxaha ay khuseyso ayaad ka helaysaa bogga internedka ee Hay'adda Caafimaadka Bulshada.
Waxay xilliga 2022 gudahiisa u badan tahay in qeybo badan oo dadka ka mid ah la siiyo doos lagu kaabaayo tallaalka covid-19. Kooxaha khatarta ugu jira qaarkood ayaa laga yaabaa in doos lagu kabaayo la siiyo xilliga deyrta 2021. Waxaad bogga Hay'ada Caafimaadka Bulshada ku jira macluumaad dheeraad ah oo dooska lagu kaabaayo ku saabsan. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Spikewax, oo ay soo saarto Moderna (horey loo odhan jiray tallaalka Covid-19 ee Moderna).
Vaxzevria, oo ay soo saarto Astra Zeneca (oo hore loo dhihi jiray tallaalka Covid-19 ee AstraZeneca).